Tag: qvidian | Martech Zone
5 Sababood oo Kooxdaada Iibinta aysan Gaarin Kootadooda
Jimco, Juun 17, 2015 Douglas Karr
Qvidian waxay daabacday Warbixintooda Isbeddellada Iibinta Iibsiga ee sanadka 2015 waxayna ka buuxsameysaa tirooyinka qeybaha iibka oo kaa caawin doona inaad qiime u yeelatid waxqabadka iibkaaga ee natiijooyinka. Ururada 2015 waxay sameynayaan isbedel aasaasi ah oo ku wajahan koritaanka gardarrada ah. Hogaamiyeyaasha iibintu waa inay dib u xoojiyaan sidii ay kooxahooda uga dhigi lahaayeen kuwa guuleysta iyagoo fiirinaya wax ka baxsan taatikada iibka tayeynta iyo xoojinta xoogagga iibka iyadoo fulineysa istaraatiijiyad dhammaadka-dhamaadka-iibinta. Maaddaama waaxaha iibku ay riixayaan kordhinta qiimaha guuleysiga iyo
Buugaagta Ciyaaraha Dijitaalka ah & Xilliga Cusub ee Iibinta
Talaado, Juun 9, 2015 Talaado, Juun 9, 2015 Christopher Faust
Deegaanka iibinta maanta, caqabado tiro badan ayaa ka hor istaagi kara hogaamiyaasha iibka inay ka caawiyaan kooxahooda inay gaaraan hadafyadooda. Laga soo bilaabo tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah illaa nidaamyo kala-jaban, iibka iibku wuxuu waqti badan ku bixiyaa howlaha maamulka iyo waqti yar oo dhab ahaantii iibinta Si loo dardar-geliyo koritaanka, loo yareeyo wax-qabad la'aanta ka dhex jirta hay'adda loona yareeyo wareejinta iibka, hoggaamiyeyaasha iibintu waa inay dejiyaan habab wax ku ool ah oo lala qabsan karo. Buugaagta Ciyaaraha Dijital ah ee iibku waa kuwo muhiim ah
Qvidian: Waa maxay Playbook Sales ah?
Haddii aad tahay urur aad u weyn gaar ahaan verticals badan, isagoo geedi fududeeyey aad kooxda iibka si aad u ogaato iyo bandhigyo ku habboon la joogo, xaaladaha isticmaalka iyo macluumaad kale oo muhiim u ah xawaaraha iyo waxtarka iibka. wicitaanada Qvidian this Playbook Sales ah. Qvidian Sales Playbooks waa boosteejo ah oo daruur ku salaysan iibinta hanuuniyey, si adag u xidh la dhexgeliyey Salesforce.com, taas oo ka caawisa iibka iyo suuq-madaxda dardar iyo xoojin iibka shirkad ayaa loo farsameeyo si loo dardar-koritaanka ganacsiga iyo